The Imperial Troopers of Star Wars Nosoratan'i Callahan | Famoronana an-tserasera
Matthew Callahan dia mitondra andiana kilalao avy amin'ny tontolon'ny Star Wars natao ho an'ny olombelona amin'ny fomba toa azy ireo tena olona niravaka tamin'ny fitafiany ny ady amin'ny tantara tsy misy zava-misy izay mety ho mpilalao fototra amin'ny sarimihetsika manaraka noforonin'i George Lucas.
Galactic Warfighters no tetikasa ary mifantoka amin'izany maha-olombelona ny miaramila imperial izay ho hita eo anelanelan'ny tantara foronina siantifika sy ny tontolo tena izy amin'ny alàlan'ny fakan-tsary an'ny Marine United States izay fantatsika avy amin'i Matthew Callahan.
Andian-tsary napetaka tsara mba haseho fotoana sasany tia ady izay naseho ny ady an-tanàn-dehibe izay nampidirana miaramila amerikana tanora.
Ny sary sasany izay tsy mampiasa afa-tsy saribakoly mba handikana tsara ny seho tsirairay izay nasehon'i Callahan ary fantany tsara amin'ny fiainany andavanandro amin'ny maha-miaramila azy. Ilay iray ihany ilay izy Niala tamin'ny infantry mba hiady amin'ny fakan-tsary.
Ny sary rehetra amin'ity andiany ity dia fialam-boly ny tena sary, noho izany dia misy fikasihana tsy misy dikany rehefa fantatsika fa mifototra amin'ny traikefan'i Callahan manokana izy ireo fa tsy ny fisainany. Miaina toy ny mahazatra izy ireo, na dia misy hafatra amin'ny fomba fijerin'ny kilalao sasany aza izany amin'ny fomba fijery lavitra sy tsy misy dikany nefa tsy miditra amin'ny tena manokana.
callahan koa maka sary tamin'ny andron'ny miaramila izay natao ho an'ny faritra maro amin'ny planeta. Toetra tsara amin'ny sariny izay ahafahan'ity andiany Galactic Warfighters ity handositra amin'io zava-misy masiaka sy masiaka io.
Manana ny tranonkalanao ianao avy amin'ity rohy ity aiza no ahitanao ny asany sisa miaraka amin'ny sary isan'andro momba ny fiainana amerikana mihitsy.
Momba ny miaramila Ady Lehibe I fandraisana afisy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny miaramila imperial kilalao nanjakan'i Callahan izay namboarin'i Callahan